ओलीको व्यहारमा सुधार नभए जे पनि हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले दियो कम्युनिष्ट सरकारलाई ठाडो चेतावनी !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ओलीको व्यहारमा सुधार नभए जे पनि हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले दियो कम्युनिष्ट सरकारलाई ठाडो चेतावनी !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सासंद डा.नारायण खड्काले अहिलेको सरकारले जोसिला र महत्वाकांक्षी योजना बनाएको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्न चुनौती दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित साक्षत्कारमा डा.खड्काले सरकारले राम्रा काम गर्नका लागि दुईतिहाई भएर मात्रै नहुने भन्दै हरेक क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा राख्न सक्नुपर्ने बताए ।
‘राजनीतिक स्थायित्व र दुईतिहाईले मात्रै हुँदैन । आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक लगायतकापक्ष सन्तुलित हुनुपर्छ । दुईतिहाईको अभिमानले सन्तुलन बिग्रेला’, डा.खड्काले कम्युनिष्ट सरकारलाई सचेत गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा ६३ जनामात्रै सासंद छन् भनेर नहेप्न डा.खड्काले सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । प्रतिपक्षसँग मिलेर जाने भनिए पनि पहिलेको सरकाले गरेका निर्णय उल्ट्याउने कार्यले कम्युनिष्ट सरकारले कांग्रेसको विश्वास गुमाउँदै गएको बताए ।
‘यो सरकार लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध छ हामी हेर्छौं । दुईतिहाईको दम्भ देखिने गरी राष्ट्रहीत विपरितका काम हुन थाले भने चुप लागेर बस्दैनौँ’, डा.खड्काले भने, ‘प्रतिपक्षमा ६३ जना छन् भनेर सोहीअनुसार व्यवहार गरियो भने कांग्रेसका लाखौँ क्रियाशील सदस्य चुप लागेर बस्दैनन् ।’